Gudoomiyaha Buulo burde oo shaqo joojin lagu sameeyay | Baydhabo Online
Gudoomiyaha Buulo burde oo shaqo joojin lagu sameeyay
Gudoomiyaha Degmada Buulo burde ee Gobolka Hiiraan Xaseey Buule, ayaa lagu sameeyay shaqo joojin , kadib markii lagu helay musuq maasuq uu ku kacay Gudoomiyaha sida uu xaqiijiyay maamulka Gobolka.
Gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga ee maamulka Gobolka Hiiraan Axmed Cabdalla Inji, ayaa sheegay in shacabka iyo maamulkii kale ee Degmadaasi ay caddeeyeen musuqa uu sameeyay Gudoomiyaha, sidaasina shaqada looga joojiyay.
Waxa uu sheegay Gudoomiye Inji in ka maamul ahaan sidoo kale ay caddeyn buuxda ku heleen guddoomiyaha, islamarkaana waxyaabaha sidoo kale lagu dhaliilayo ay tahay shaqo xumo iyo boob hantiyeed waa sida uu hadalka u dhigaye.
“Guddoomiyaha waxa uu sameeyay Musuq, waxaan ka joojinnay shaqadii, waxaan helnay caddeyn ah Boob hantiyeed, shaqo xumo iyo musuqa raashiin gar gaar ah, maamulka iga sarreeya ee Hirshabelle ayaan kala tashan doonnaa waxa laga yeelayo guddoomiyaha, laakiinse aniga waxaan awoodaa inaan shaqada ka joojiyo” ayuu yiri guddoomiye Inji.
Ka sokoow shaqo joojinta lagu sameeyay Gudoomiyaha Degmada Buulo burde waxaa jirta in Maamulka Gobolka uu sheegay in baaritaan lagu haayo masuulkaasi oo hadda wax shaqo ah aanan qaban.
Maamulka Gobolka wuxuu ku goodiyay wixii dambi ah ee lagu helo Gudoomiyaha Buulo burde in maxkamad lala soo taagi doono.
Shacabka Degmada Buulo burde oo ay isugu darsantay abaarta jirta iyo go’doonka Degmada ay ku jirto, ayaa xilligaan u baahan helida maamul hogaan wanaagsan oo caddaalada ka shaqeeya.